Ahoana ny fomba fandraisam-peo an-tsarimihetsika Google Meet | Androidsis
Ahoana ny fomba fandraisam-peo antso an-tsarimihetsika Google Meet
Google navoaka Meet, iray amin'ireo fitaovana manandanja indrindra amin'ity taona 2020 ity. Ny orinasa Mountain View dia nanapa-kevitra izany tao anaty efitrano feno, satria ny videoconferensi no filaharana ary manana fifaninanana masiaka toy ny fampiharana Zoom, Skype na WhatsApp.
Ny fampiharana Google Meet dia manamora ny fandraketana antso an-tsary ho an'ny mpikarakara na olona ao anatin'io fikambanana io. Meet Maimaimpoana mandra-pahatongan'ny 30 septambra amin'ity taona ity, Google dia maniry ny hanandraman'ny mpampiasa azy ary tiany hitazona azy io fa an'ny mpanjifa G-Suite Enterprise.
1 Ahoana ny fomba fandraisam-peo antso an-tsarimihetsika Google Meet
2 Google Duo, ilay solony
Tonga dia mahitsy izy io afaka mirakitra an-tsary antso an-tsarimihetsika nataon'i Mihaona ny GoogleRaha mampiasa azy matetika ianao dia te-hanoratra azy mba hahafahanao mizara azy dia hahaliana tokoa. Google Meet dia tafiditra ao amin'ny Gmail, farafaharatsiny ao amin'ny kinova desktop sy amin'ny Android anananao ao amin'ny Google Play Store.
Raha te-handraikitra fivoriana ianao dia araho ny dingana tsirairay mba hanatanterahana azy tsara: Mandrosoa ny fangatahana na manatevin-daharana fivoriana dia tsindrio ireo teboka telo eo amin'ny farany ambany ankavanan'ny Tsindrio ny "Fivoriana firaketana" eo ambony, kitiho ny "Ekeo" hangataka fanekena. Raha te hampijanona azy ianao dia miverena amin'ireo teboka telo ary tadiavo ny "Atsaharo ny firaketana" ary avy eo manamafy indray amin'ny "Atsaharo ny firaketana".
Ho voatahiry ao amin'ny Google Drive ny fandraisam-peo, ampidino ho azy izany ary azontsika atao ny misintona azy na aiza na aiza, na telefaona, solosaina, takelaka na vokatra hafa an'ny maro misy. Google Meet dia manomboka manintona mpampiasa maro izay te hanandrana azy ary hijanona eo amin'ny lampihazo. Raha te-hahita ny rakipeo ao amin'ny Drive ianao dia tadiavo ny "Meet Recordings"
Google Duo, ilay solony
Google Duo dia iray amin'ireo fampiharana tsy azonao adino na koa, satria manokana ny manao antso an-tsary hatramin'ny olona 12. Maimaimpoana tanteraka ny Duo, afaka miara-miaina amin'ny Google Meet ianao raha manao kaonferansa horonantsary isan-karazany ary manana safidy lehibe azo isafidianana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Ahoana ny fomba fandraisam-peo antso an-tsarimihetsika Google Meet
OnePlus Nord 5G dia ofisialy: Snapdragon 765G, hatramin'ny 12GB RAM sy Android 10
Ireo dia telefaona Xiaomi rehetra izay handray MIUI 12 amin'ny volana aogositra